मौसम परिवर्तनले बच्चाको स्वास्थ्यमा असर - Tulsipur Online
मौसम परिवर्तनले बच्चाको स्वास्थ्यमा असर
Posted by Admin | ५ आश्विन २०७८, मंगलवार १३:०३ |
५-असोज/ मौसम परिवर्तनसंगै दाङका अस्पतालहरुमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या भएका बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । केही दिन यता सरकारी अस्पताल तथा निजी क्लिनिकहरुमा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका बालकालिकाहरुको संख्या बढेको हो । अहिले २ महिनादेखि दुईबर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा यस्तो खालको समस्या धेरै देखा परेको तुलसी बाल अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. किशोर खत्रीले जानकारी दिए ।
श्वासप्रश्वास बाहेक बालबालिकाहरुमा रुघा खोकी, ज्वरो, भाईरल निमुनिया, पखाला, जन्डिस, टाईफाईड, डेङ्गु, मलेरियाजस्ता समस्या भएका बालबालिकाहरु अस्पतालमा बढि आउने गरेको डा. खत्रीले जानकारी दिए । करिव एक महिनादेखि बालबालिकाहरुमा यस्ता खालको समस्या देखा परेको उनको भनाई छ । तिमध्ये श्वासको गति तीव्र हुने कोखा हान्ने र अक्सिनजको आवश्यकता पर्ने र खतराका लक्ष्यण देखा परेका बालबालिकाहरुलाई आफुहरुले अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरेको खत्रीले जानकारी दिए ।
अहिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने ८० प्रतिशत बालबालिकामा यस्तो खालको समस्या रहेको खत्रीको भनाई छ । त्यो बाहेक जस्ले आमाको दुध चुस्न सक्छ, जस्लाई श्वास प्रश्वासमा समस्याहरु कम छ त्यस्तालाई औषधि दिएर पठाउने गरेको खत्रीले बताए । त्यसैगरी पाल्पाली मेडिको फर्माका डा. राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि एक महिनादेखि अस्पतालमा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका धेरै बालबालिकाहरु उपचारको लागि आउने गरेको बताए । बढि मात्रामा बालबालिकामा स्याँ, स्याँ हुने, रुघाखोकी ज्वरो आउने, दिशा पातलो हुने निमुनियालगायतका समस्याहरु भएका धेरै बालबालिका उपचारको लागि आउने गरेको उनको भनाई छ ।
करिव एक महिनाको हाराहारीमा अस्पतालका उपचारको लागि आउने ६ महिनादेखि १० बर्ष उमेर समुहका बालबालिकामा यस्तो समस्या देखा परेको डा. श्रेष्ठले बताए । अस्पतालमा उपचारको लागि आउने बिरामी मध्ये आधा भन्दा बढि बालबालिकाहरु हुने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्ता समस्याबाट बच्नको लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिँदै चिसोबाट बच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
मौसम परिवर्तनसंगै भाईरल फ्लुका बिरामीहरुको संख्यामा वृद्धि भएको तुलसीबाल अस्पतालका परिष्ठ बालरोग बिशेषज्ञ खत्रीले बताए । अहिले दाङलगायत छिमेकी जिल्लाहरु सल्यान, रोल्पा, रुकुम, प्यूठानबाट समेत यस्ता समस्या भएका बालबालिकाहरु उपचारको लागि अस्पतालमा आउने गरेको उनको भनाई छ । तुलसी बाल अस्पतालमा अहिले जटिल किसिमका समस्या भएका ६० भन्दा धेरै बालबालिकाहरु भर्ना भएका छन् ।
साथै वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा.खत्रीले बच्चाले राम्रोसंग आमाको दुध नचुस्नु, छिटो–छिटो श्वास फेर्नु, कोखा हान्नु, हात खुट्टा निलो हुनु, अत्याधिक ज्वरो आउनु, कहिले काही आँखा फर्काएर बेहोस हुनु यी लक्षणहरु खतराको संकेत भएको बताए । बालबालिकाहरुमा यस्ता खालका समस्या देखा परेमा बिशेषज्ञ डा. अथवा तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्ने उनको सझाव छ ।
यसबाट बच्नको लागि सर्व प्रथम साधारण स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने डाक्टरहरुको सुझाव छ । मौसम परिवर्तन हुने क्रममा यस्ता खालका समस्या बच्चाहरुमा देखा पर्ने भएकाले घरेलु जडिवुटी, झोलिलो, ताजा तथा तातो खानाहरु खुवाउनुका साथै चिसोबाट बच्नुपर्ने खत्रीले बताए ।
Previousसंविधान कार्यान्वयनका चुनौती
Nextनेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता